Uncategorized – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
November 13, 2019 Ali Osman 0
November 13, 2019 marqaan 0
Hillary Clinton oo markale diyaar u ah in ay la dagaalanto Madaxwayne Trump.
Hillary Clinton ayaa sheegtay in uu saran yahay cadaadis ah in mar kale ay latartanto madaxwaynaha haya talada Mareykanka ee Donald Trump, kaas oo uga guulaystay doorashadii dhacday sadaxsano kahor. Musharaxii hore ee Dimoqoraadiyiinta ayaa […]
Alshabaab oo Khaarijisay Gudoomiye iyo Gudoomiye kuxigeen katirsanaa Maamulka Hirshabeele.
Wararka naga soo gaaraya duleedka Magaalada Balcad ee Gobolka Shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in halkaas xalay lagu dilay Guddoomiye iyo ku xigeenkiisa. Labada qof ee la dilay ayaa la sheegay in ay mas’uuliyiin ka ahaayeen […]
November 13, 2019 marqaan 2
Diiwaan-gelinta musharrixiinta u tartamaya xilka guddoomiyaha Baarlamanka Puntland, ayaa sida qorshaysan la soo geba-gabaynayaa maanta oo Arbaco ah. Guddiga doorashada guddoomiyaha golaha Wakiilada Puntland, ayaa maalmihii la soo dhaafay diiwaan-gelinayay musharrixiinta u tartamaysa qabashada xilka […]
Dowladda Ingiriiska oo soo saartay Digniin yaab leh “Hargaysa iyo Barbara waxay ka amni wanaagsan yihiin Muqdisho”.
November 13, 2019 marqaan 3
Dowladda Ingiriiska ayaa ka digtay weerarro argagixiso oo ka dhaca Magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya. Qoraal digniin ah oo uu soo saaray xafiiska arrimaha dibadda UK ayaa looga digay muwaaddiniinta u dhashay Ingiriiska in […]
Fahad Yaasiin iyo Taliye Rufaaci maxay kawada hadleen xageese ku kulmeen?.
Agaasimaha guud ee hey’adda sirdoonka dalka Nigeria ee ayaa galinkii dambe ee shalay soo gaaray magaalada Muqdisho, waxaana la sheegay in dalka uu ku yimid booqasho qaadanaysa labo maalin. Agaasimaha oo lagu magacaabo Axmed Abubakar […]
Diyaarad Muqdisho Kusii Jeedey oo Hawada Sare Cilad Ku Qab Satay
Diyaarad Xamuul ah kuna soo jeedday Magaalada Muqdisho ayaa shalay cilladi ku wajahday Hawada waxaana ay si deg deg ah ugu degtay Magaalada Gaarisa. Diyaaraddan oo ka soo duushay Magaalada Nairobi kuna soo jeedday Muqdisho […]
Iyadoo bishii hore ee October uu gaadhay hogaamiyaha maamulka Khaatumo Dr. Cali Khaliif Galaydh magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaliya isla markaasna warar kala duwan ay kasoo baxayeen safarkiisa Muqdisho ayaa waxaa haatan banaanka timid […]
Hanjabaado cusub iyo cabsi ayaa lasoo dersay wiil iyo gabar dhalinyaro ah oo ayagoo laysu diidanyahay isku guursadey magaalada magaalada Muqdisho sannadkii hore, lamaanahan oo guurkooda uu sababey dhimasho ka dhalatay faquuqa guurka. Maxamed Cabdiraxmaan […]
Raysal wasaaraha Soomaaliya Xasan cali Khayre Ayaa Kulan Paaris Su’alo lagu Weydiinayey Waxaa uu kula wareegey Su’al Weydiinta ,waxaana Beesha Calamka Wax ka weydiyey Deeqda Inaysan Soomaaliya Weydiin Halkay u Bahan Tahay Inay Ku Bixiyaan. […]
November 12, 2019 marqaan 2
Xisbiyada Mucaaradka Maamulka Soomailand Ayaa ka Horyimi Ansaxinta Xubnaha Doorashada Soomaliland oo Golaha Wakiilada Soomaliland Qasab Ku meel Mariyeen Siday Sheegeen,Kulan Xisbiyada UCID Iyo WADANI Yeesheen Ayey Ku Diideen. Waxay Sheegeen Inay xaaran Ahayd Ansaxinta […]
November 12, 2019 marqaan 0
Soomalida Ayaa Siweyn waxay Uga Gilgilatey Dhawaaqi kasoo Yeedhay Sheekh Shariif Iyo xasan Sheekh maxamud Hadalada Colaada Huwanaa,Hadaba Dadka Baraha Bulshada Caanka ka Ah Ayaa Siweyn Uga Falceliyey Arinkaasi,waxaana Ka mida Dabcasar. Waxaa uu ka […]
Xogta Sir Beesha Abgaal Sh Sharif Ku Kacay Go’aan ka Dhan Muqdisho ,Dhoobo Xagee Jooga
Suldaan Wabar oo Mudo Dagaal Kula Jira Maamulka Soomaliland Ayaa Markii Ugu Horeeyey Bixiyey Waraysi uu Uga Hadlayo xaalada Siyaasada Maamulka Soomaliland,Dagaalka uu Kula Jiro Iyo Waliba Eedayn uu Ujeediyey Madaxweynaha Soomaliland Muuse biixi cabdi. […]
AKHRISO:- DFS oo war kale kasoo saartay Fatahaada Wabiyadu ay ka sameeyeen Gobollada Dalka.
Dowladda federaalka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in hoos u dhac uu ku yimid qatartii fatahaadda wabiyada Jubba iyo Shabelle inkastoo aysan dowladdu meesha ka saarin hadii roob da’o in qatar ay […]
Maxamuud Ducaale Saleeban oo kamid ah siyaasiyiinta Isaaq ee kusugan Barbara ayaa layaab kutilmaamay hadalkii kasoo yeedhay xubno iyagu sheegay in ay yihiin Jabhad udiyaarsan Xurreynta Gobolka Awdal. Siyaasigaan ayaa sheegay in hadalka Jabhadda ay […]
Bariga iyo Kuufurta deegaanada Maamulka Somaliland ayaa waxaa ku sii xoogaysanay Jabhado ka soo horjeeda nidaamka Maamul Madaxweynaha Maamulkaasi Muuse Biixe Cabdi iyo Xisbiga uu hoggaamiyo ee Kulmiye. Jabhad la baxday Cawaale oo Saddexdii bilood […]
DAAWO:- Xasan Daahir oo isku matalay Sheikh Shariif iyo Siyaad Barre “Labadaba Xilka sidii ay kuheleen ugama tagin”.
Sheikh Xasan Daahir Aweys oo muuqaal iska soo duubay ayaa si adag uweeraray Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo ay mar kawada tirsanaan jireen Maxaakiimti islaamka. Xasan Daahir ayaa si gaar ah uga hadlay hadalkii dhawaan […]
SAWIRO:- Dhoobe Daareed oo Dhahar ka Bilaabay Olole ka dhan ah Puntland .
Guddoomiye Cabdixakiin Dhoobo Daareed ayaa maanta gaaray degmada Dhahar xarunta gobolka haylaan si uu ballaariyo ololaha ka dhanka ah maamulka Siciid Deni. Boqolaal dadweyne ah ayaa Dhoobo Dareed iyo wafdiga la socda ku soo dhoweeyey […]
DAAWO:- RW Kheyre oo si maqaam sare leh loogu soo dhaweeyay Paris + Kulan uu la qaatay Emmanuel Macron.
Madaxweynaha Fareansiiska, Emmanuel Macron, ayaa aqalka madaxtooyada dalkiisa kusoo dhaweeyay wafdiga uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ee ka qayb gelaya madasha Nabadda Paris. Soo dhaweynta ayaa qayb ka aheyd […]
AKHRISO:- MD Farmaajo oo Khudbad muhiim ah ka jeediyay shirka ka furmay Nairobi.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyey Shirka Caalamiga ah ee Horumarka iyo Dadweynaha oo ka furmay magaalada Nayroobi ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya ay dadaal muuqda gelisay awoodsiinta dhallinyarada […]